Ataovy madio ny Apple Watch miaraka amin'ny toro-hevitra | Vaovao IPhone
Ny Apple Watch dia hiaraka amintsika akaiky kokoa noho ny fitaovana hafa mandritra ny andro, ary izany dia tsy azo ihodivirana, na dia liana te hahafantatra antsika aza, dia miteraka loto. Noho izany, anio ao amin'ny iPad News dia hanome torohevitra tsara momba ny fitazonana ny Apple Watch ho madio sy mitandrina ianao mba hahafahany mijery mandrakariva satria mendrika eo an-tananao. Ny famantaranandro dia sombin-javatra izay milaza betsaka momba ny olona iray, noho izany ny hakantony, ny fitambaran'izy ireo ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy maintsy ilaina amin'ny toe-javatra rehetra.
1 Manadio ny fehikibo
2 Ny efijery
3 Buttons and Digital Crown
Manadio ny fehikibo
Ny fehin'ny Apple Watch Sport, ohatra, dia vita amin'ny fitaovana antsoina hoe fluoroelastomer, aryMiampy izany satria tsy mila fepetra sarotra loatra ny fanadiovana sy ny fikojakojana azyMiaraka amin'ny savony kely sy rano mafana, esorina foana amin'ny Apple Watch dia ho ampy mihoatra ny ampy.
Etsy ankilany, ny ambin'ny buckles dia mitaky fanadiovana mitandrina kokoa, miaraka amin'ny lamba microfiber somary mando dia ho ampy ho an'ny fikojakojana. Saingy tsy maintsy tadidintsika fa noho ny fikolokoloana ny kofehin-koditra dia ampirisihina tsy hidoboka na hihoatra ny rano, satria mety hiteraka akanjo sy loko ilay izy.
Apple dia tsy nanondro karazana fomba fanao na fitaovana natolotra ho an'ny fanadiovana, noho izany tsy hiasa amin'ny karazan-tsolika simika manimba isika, hifantoka amin'ny fanadiovana amin'ny rano sy lamba microfiber toy ny solomaso ohatra. Raha hitantsika fa matavy loatra na be hatsembohana loatra izany, ny tolo-kevitro dia ny hampiasa ilay mahazatra Ny famafana izay amidy ho an'ny solomaso fanadiovana, no fomba izay nampiasaiko hatrizay teo amin'ny efijery ny iDevices.
Buttons and Digital Crown
Ny maloto sy ny vovoka dia mety mikatona eo anelanelan'ny banga madinidinika ao anatin'ireny haino aman-jery interface roa ireny, izay mety hanelingelina sy hanimba ny zavatra niainan'ny mpampiasa. Araho ireo dingana tsotra ireo mba hanadiovana azy ireo:
Alao ny Apple Watch amin'ny tadiny.
Vonoy ny Apple Watch (Tsindrio ary tazomy ny bokotra mandra-pisehoan'ny efijery fanidiana)
Apetraho ao anaty rano mafana ny Apple Watch ary kitiho moramora ny bokotra
Ataovy im-betsaka araka izay ilaina izany hetsika izany
Ataovy maina ny Apple Watch amin'ny lamba izay tsy mamela sisa tavela amin'ny landihazo na fibre
Manantena izahay fa raha iray amin'ireo manana vintana amin'ny Apple Watch ianao fa hanampy anao ireo torohevitra ireo, ary raha manana soso-kevitra fanampiny ianao dia aza misalasala manoratra azy ireo ao anaty hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ataovy madio ny Apple Watch miaraka amin'ireo toro-hevitra ao aminay
Izaho dia niaraka taminy iray volana ary tsara ny écran na ianao manadio azy amin'ny solo-lamba na lobaka, ny fatorako no ilay fotsy ary ny tena marina dia tsy naloto araka ny nieritreretako azy, ary raha maloto izy mora ny manadio azy. Tsara koa ny manafoana ny ilany ambanin'ny sensor, rehefa manao fanatanjahan-tena be ianao sy hatsembohana dia mety manangona toy ny famantaranandro hafa ihany koa ny loto.
Izaho dia superintefesado manao ahoana amin'ny ataonao amin'ny fotsy satria hitako fa mainty kely ny fahitako azy, ka tsy dia maloto be, miaiky izany ve ianao?
Mitady namana hizaha toetra ny sary aho na handefa ny fitempon'ny fon'ny fony. Tsy afaka nanaporofo izany aho. Tsy misy namana manana izany. Raha misy olona te-hizaha toetra azy dia mifandraisa. Avelao ny mailako.
Unboxing ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy Apple Watch
Type Detail dia manazava ny antony ampiasain'ny Apple ho fontana i San Francisco